यस्ता छन् दमका कारण, लक्षण र उपचार | Hamro Patro
७ भाद्र २०७४, बुधवार
द्वितीया , दर खाने दिन
नेपाली समय: 10:06:55
यस्ता छन् दमका कारण, लक्षण र उपचार
डा. अशेष ढुंगाना - May 03 2017
दम एक किसिमको एलर्जिक रोग भएका कारण बिरामीलाई रुघा लागिरहने र शरीर चिलाउने पनि हुन सक्छ।
यो पनि हेर्नुहोस् : किन हुन्छ पत्थरी? पत्थरी हुन नदिन के गर्ने?
घ्यार–घ्यारजस्तै खोकी पनि दमको एउटा मुख्य लक्षण हो। लामो समयसम्म खोकिरहेमा दमको परीक्षण गराउन जरूरी छ। कसैकसैलाई भने दमको समस्या नभई खोकी मात्र लाग्ने पनि हुन्छ। दम एक किसिमको एलर्जिक रोग भएका कारण बिरामीलाई रुघा लागिरहने र शरीर चिलाउने पनि हुन सक्छ।
दम लाग्नुको ठ्याक्कै कारण ‘मेडिकल साइन्स’ले पत्ता लगाउन सकेको छैन। तर, वंशाणुगत जोखिम र वातावरणीय प्रभावले यो रोग हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सामान्यता परिवारका कुनै सदस्यलाई दम छ भने अरुलाई पनि देखिन सक्छ। साथै, वातावरणीय प्रदूषणलाई पनि दम हुने कारण मानिन्छ। धुवाँधुलो, व्यायाम र विभिन्न औषधि (जस्तैः एस्पिरिन) पनि दमका कारक हुन्।
दम भइसकेकाहरुलाई घरभित्र एलर्जी गराउने (उपियाँ, उडुस, साङ्ला, कार्पेट वा सिरकको धुलो, धुवाँ, घर पालुवा जनावरका रौं आदि) कुराले झन् समस्या निम्त्याउँछ। यसैगरी धूमपान, वातावरणीय प्रदूषण र तनावले पनि दम बढाउँछ।
दमको शंका लागेमा के गर्ने?
दम भएकाले के गर्ने?
सामान्यतः इन्हेलर यन्त्र तीन प्रकारका छन् १. एमडिआई (मिटर डोज इन्हेलर) २. डिपिआई (ड्राइ पाउडर इन्हेलर) र ३. नेबुलाइजर (नेबुलाइजरको प्रयोग धेरैजसो जटिल र अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा गरिन्छ)। एमडिआई र डिपिआई सजिलोसँग बोक्न र प्रयोग गर्न सकिने भएकाले घरमै प्रयोग गरिन्छ। मिटर डोज इन्हेलरमा औषधि ‘स्प्रे’को रुपमा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै ड्राइ पाउडर इन्हेलरमा औषधिको धुलो क्याप्सुलमा राखिएको हुन्छ। जुन इन्हेलर यन्त्रद्वारा लिइन्छ। यसका अलावा एमडिआईसँग श्वासको राम्रो संयोजन गर्न नसक्ने बिरामी र वृद्धावस्थाका व्यक्तिले ‘स्पेसर’ पनि सँगै प्रयोग गर्न सक्छन्।
(छाती तथा श्वासप्रश्वास रोग विशेषज्ञ डा. ढुंगाना वीर अस्पतालमा कार्यरत छन्)